SomaliTalk.com » 2013 » May » 04
Home » Archive Maalinta May 4th, 2013
Admiral Faarax Qare “Soomaaliya Waxay ku Waayeysaa 97% xuquuqdeeda Badda ay haysato hadda, Haddii la tirtiro Law no. 37”
“… 12-mayl haddii aanaan diidi lahayn waxay noqon lahayd in riigagga batroolka laga qodo Xamar dushiisa meel aad arkeysid haddii aad xeebta istaagtid. Kalluunkii in laga dabto ayey noqon lahayd, qashinka in lagu shubo ayey noqon lahayd, Arrintaasi mid la qaadan karo ma ahayn….” “arrrintaas waa ka gariirnay, waxay noqotay ugu dambayntii in naloo soo jeediyo cudurdaar...
Muqdisha oo Laga Xusay Maalinta Caalamiga ah ee Madaxbanaanida Saxaafadda.
Munaasibad lagu xusayay Maalinta Madaxbanaadida Saxaafadda Caalamiga ee 3-da May ayaa ka dhacday Hotelka Jazeera ee Magaalada Muqdisho. Munaasibaddan oo ay iska Kaashadeen Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ iyo ARTICLE-19 waxaana ka soo qayb galyn Siyaasiin, Guddiga Baarlamaanka u Qaabilsan Warfaafinta iyo Qaybaha Warbaahinta ka hawl gasha Magaalada Muqdisho. Furitaankii Munaasibadda...
Isbitaal Casri ah oo loogu Magacaabo Al-Birri oo laga Furey Duleedka Magaalada Muqdisho.
Munaasabad si heer sare ah loo soo Agaasimey islmarkaana lagu furayey Isbitaal Casri oo lagu Magacaabo Isbitaalka Guud ee Al-Birri oo ku yaala Duleedka Magaalada Muqdisho Gaar ahaan Agagaarka KM 13 ayaa waxaa Furitaankaasi ka Qaybgaley Madaxda Isbitaaladda Gaarka loo leeyahay iyo kuwa Guud, Culimaudiin , Nabadoono, Dhaqaatiir , Dibolomaasiyiin, Madaxda Jaamacadaha lagu barto Caafimaadka iyo Madax...